Epistily fahatelo nosoratan'i Joany - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Epistily fahatelo nosoratan'i Jaona)
Ny Epistily fahatelo nosoratan' i Jaona na Epistôla fahatelo nosoratan' i Joany na Taratasy fahatelo nosoratan' i Joany dia boky ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Testamenta Vaovao izay isan' ireo atao hoe epistily na "taratasy". Isan' ireo atao hoe Epistily katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an' ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan' ny taona 90 sy 110 no nanoratana azy.
2.2 Ny anoratana
4 Ny lahatsoratra
Ny anaran' ny bokyModifier
Τρίτη Επιστολή Ιωάννη / Tritê Epistolê Iôannê no anaran'io epistily io amin'ny teny grika fa Epistula III Ioannis kosa amin'ny teny latina.
Ny lovantsofin'ny Fiangonana dia manao ny epistily telo mitondra ny anaran'i Joany (na Jaona) ho nosoratan'i Joany Evanjelista. Ankehitriny anefa dia maro ny ady hevitra ny amin'ny fahamarinan'izany lovantsofina izany. Misy ny manampahaizana izay milaza fa ny Epistily faharoa sy ny Epistily fahatelo amin'ny anaran'i Joany dia soratr'olona izay mety ho ilay "Loholona" na "Antidahy", atao hoe Joany (na Jaona) koa, resahina ao amin'ny Epistily faharoa (2Joa. 1.1) sy ao amin'ny Epistily fahatelo (3Joa. 1.1). Ny ankamaroan'ny mpikaroka dia mihevitra fa ilay Joany Antidahy no nanoratra ireo epistily telo ireo sy ny Evanjelin'i Joany.
Ny Epistily fahatelon'i Joany, izay tsy ahitana afa-tsy andininy 15, dia nosoratana ho an'olona atao hoe Gaio (2Joa. 1.1), izay mety ho Kristiana filamatra tao amin'ny Fiangonana.
Ny antony nanoratana ny taratasy dia ny fitondran-tenan'ny Kristiana iray atao hoe Diotrefa (3Joa. 1.9) izay tsy nety nanaiky ny fahefan'ny "Loholona" na ny "Antidahy" izay nampanantena ny hikarakara manokana an'i Diotrefa (3Joa. 1.10). Midera an'i Gaio ny mpanoratra (3Joa. 1.3-7) sy mamporisika azy hanohy ny fandraisam-bahiny ary hiasa ho an'ny Fahamarinana (3Joa. 1.8).
1 Izaho loholona mamangy an' i Gaio, ilay malala, izay tiako amin' ny fahamarinana.
2 Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin' ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.
3 Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana.
4 Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako.
5 Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin' inona na amin' inona ataonao amin' ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy,
6 izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan' ny fiangonana; dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin' Andriamanitra ianao;
7 fa noho ny Anarana no niangany, ka tsy naka na inona na inona tamin' ny jentilisa izy.
8 Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin' ny fahamarinana.
9 Nanoratra tamin' ny fiangonana Ihany aho; nefa Diotrefa, izay te-ho lohany, dia tsy mba mandray anay.
10 Koa amin' izany, raha tonga aho, dia hotsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy; ary tsy afa-po amin' izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay ta-handray azy dia raràny sy roahiny hiala amin' ny fiangonana.
11 Ry malala, aza ny ratsy no alain-tahaka, fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin' Andriamanitra; fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an' Andriamanitra.
12 Demetrio dia tsara laza amin' ny olona rehetra sy amin' ny fahamarinana koa; ary izahay koa manambara izany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay.
13 Nanana zavatra maro hosoratana aho, nefa tsy tiako hosoratana aminao amin' ny ranomainty sy ny penina;
14 fa manantena hahita anao faingana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana. Ny sakaiza atý manao veloma anao. Veloma amin' ny sakaiza tsirairay araka ny anarany avy.
↑ Ity andininy faha-14 ity dia mizara ho andininy faha-14 sy faha-15 (manomboka eo amin' ny hoe "Ho aminao anie ...") ao amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_fahatelo_nosoratan%27i_Joany&oldid=1013365"
Dernière modification le 3 Aogositra 2021, à 13:08
Voaova farany tamin'ny 3 Aogositra 2021 amin'ny 13:08 ity pejy ity.